ကွန်ပြူတာနဲ့အသက်မွေးချင်ရင် - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
တည်နေရာ: nearly kl
ပို့စ် 118 ခုအတွက် 525 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျွန်တော့်အကြောင်းကိုအရင် ပြောပြပါ့မယ် လိုအပ်မယ်ထင်လို့ပါခင်ဗျာ..
ကျွန်တော်က မလေးရှားမှာစားသောက်ဆိုင် စားပွဲထိုးလုပ်ပါတယ်..ကွန်ပြူတာအကြောင်းကိုသိပ်မသိ ပေမဲ့
တော်တော်ကြီးကိုစိတ်ပါဝင်စားဖြစ်မိပါတယ်..ဒီဖိုရမ်ထဲကိုရောက်ပြီးတော့ အနည်းငယ်တီးမိခေါက်မိဖြစ်ပြီး ပိုပြီးစိတ်
ဝင်တစားဖြစ်မိပါတယ် ကွန်ပြူတာကို..ဒီတော့ကျွန်တော် စဉ်းစားမိတာက ကွန်ပြူတာအကြောင်းကိုပိုပြီး လေ့လာနိုင်အောင် ဆိုရင် ကွန်ပြူတာပညာရပ်တခုခုနဲ့ အသက်မွေးမှသာလျင် ပို၍လေ့လာနိုင်မည်လို့ပါ..သို့ကြောင့် ကွန်ပြူတာဖြင့်ကျောင်းပြီးတာမျိူးမဟုတ်ပါဘဲ သင်တန်းတခုခုတက်၍ကွန်ပြူတာဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုတော့မည်ဆိုလျင်..
၁.. မည်သည့်ဘာသာရပ်က အမြန်ဆုံးအလုပ်ရှာဖွေနိုင်ပါမည်လဲ ဥပမာ autocad, photoshop စသည်ဖြင့်
၂..ထို့ထပ်ပို၍ မည်သည့် ဘာသာရပ်က ပရောဖက်ရှင်နယ်အဖြစ် အသက်မွေးရန်ရွေးချယ်သင့်ပါသလဲ ဥပမာ programming , java စသည်ဖြင့်(ကျွန်တော်ပေးသောဥပမာတို့မှာ သိ၍ပေးထားဖြင်မဟုတ်ပါ)
၃..ဤကဲ့သို့ လေ့လာနိုင်ရန်ဘယ်က စရပါမည်နည်း
စသည်ဖြင့်တို့ကို ယခုကွန်ပြူဖြင့်အသက်မွေးနေသော အကိုအမများ
ကွန်ပြူတာဖြင့်အသက်မမွေးသော်လည်း ဗဟုသုတ များစွာရှိသောအကိုအမများ မှလမ်းညွှန်ပေးနိုင်ပါရန်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျ
ဖိုရမ်ထဲတွင် ဤပို့စ်နှင့် တူသောပို့စ်ရှိနေခြင်း ပို့စ် နေရာမှားနေခြင်း ရေသားထားသည်များမှားနေခြင်းများရှိပါက ဖိုရမ်မှ တာဝန်ရှိအကိုအမများမှ လိုအပ်သလိုတည်းဖြတ်ပေးပါ ခင်ဗျ
အောက်ပါအသင်းဝင် 32 ဦးတို့မှ khaing king အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုစံငြိမ်း, ကျန်းသုငြိမ်း, တီဘွား, နီထွန်းဦး, မိုးအာကာ, မျိုးဟန်ထက်, ဝင်းကျော်ဦး, သန့်ဇင်ဌေး, အိုက်ထွန်း, ကျော်တိုး, စောထွန်းဝင်း, မေဦးမွန်, မောင်စိန်ရွှေ, အေးချမ်းမောင်မောင်, aozora, aungkohtat, Emc Arkar, foesoe, frogfish, g00gle, htethtet, kingofvirus, kokomaung.ko28, Lwin Thu, mg aung kyaw, minthike, minthumon, mr.vampire, pannuko, thetzin, yelinoo, zo
khaing king ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by khaing king
ပြန်စာ - ကွန်ပြူတာနဲ့အသက်မွေးချင်ရင်
ကွန်ပြူတာနဲ့ အသက်မွေးချင်ရင်တော့ အလုပ်အလွယ်ရနိုင်တာ photoshop ပေါ့။ ပညာရှင် တစ်ယောက်အနေနဲ့လို့ ပြောရင်တော့ လိုင်းကများလာပြီ။ graphic design သမားဆိုရင်လည်း Illustrator, Indesign, coreldraw, Autocad, 3D Max တို့ကျွမ်းကျင်ရင်တော့ အဆင်ပြေလိမ့်မယ်။ programmer ပိုင်းတော့ ကျွန်တော်သိပ်မသိလို့။ network engineering ဆိုရင်တော့ ငါးနှစ် ခြောက်နှစ်လောက် အရမ်းကြိုးစားရင်တော့ ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင် 23 ဦးတို့မှ အောင်မိုးထွန်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုစံငြိမ်း, ကျန်းသုငြိမ်း, ဆရာသဘိတ်, သန့်ဇင်ဌေး, အိုက်ထွန်း, ကျော်တိုး, စောထွန်းဝင်း, မောင်စိန်ရွှေ, အေးချမ်းမောင်မောင်, aungkohtat, AZM, frogfish, g00gle, khaing king, kingofvirus, Lwin Thu, minthike, minthumon, mr.vampire, pannuko, thetzin, yelinoo, zo
ပို့စ် 44 ခုအတွက် 78 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အောက်ပါအသင်းဝင် 8 ဦးတို့မှ tharchawlay အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
aungkohtat, Emc Arkar, khaing king, kingofvirus, minthike, pannuko, thetzin, zo
Find More Posts by tharchawlay
24-07-2011, 03:18 PM
ပို့စ်2ခုအတွက် 19 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
နားလည်လွန်းလို့တော့မဟုတ်ပါဘူး....ကွန်ပြူတာနဲ့ အသက်မွေးမယ်ဆိုရင်တော့ မိမိကိုယ်ကို ဆန်းစစ်ဖို့လိုမယ်လို့ ထင်ပါတယ်...ဥပမာ...ကိုယ် ဘာနဲ့ ကျောင်းပြီးထားတာလဲ...ဘာကို ၀ါသနာပါတာလဲ...စသည်ဖြင့်ပေါ့...ကျွန်တော်ဆိုရင်လဲ ၀ါသနာ ပါပါတယ်...ဒါပေမယ့် မိမိ လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ တိုက်ရိုက်ပတ်သက် ဆက်စပ်တဲ့ ပညာရပ်မျိုးပေါ့...စဉ်းစားပြီးတော့ အချိန်ပေးနိုင် မပေးနိုင်ပေါ်မှာလဲ မူတည်ပါတယ်...အားအားရှိ ကွန်ပြူတာရှေ့ ထိုင်နေရတယ် ဆိုရင်တော့ လေ့လာရင်းနဲ့ မိမိစိတ်ဝင်စားရာကို လိုက်စားသွားရင်းနဲ့ ပရိုတစ်ယောက်ဖြစ်လာမှာပါ...ဘာဖြစ်လို့ ဒီလိုပြောရတာလဲ ဆိုရင် ကွန်ပြူတာ ဆိုတာ ပညာရပ်ကို လိုက်စားတော့မယ်ဆိုရင် မိမိဝါသနာ နဲ့ အများကြီးသက်ဆိုင်တယ်လို့ ခံစားမိတာကြောင့်ပါပဲ...ကျေးဇူးတင်ပါတယ်....
အောက်ပါအသင်းဝင် 16 ဦးတို့မှ လင်းထိုက် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကျန်းသုငြိမ်း, နီထွန်းဦး, မျိုးဟန်ထက်, ရှင်းလေး, အိုက်ထွန်း, aungkohtat, bonge, g00gle, khaing king, kingofvirus, Lwin Thu, minthike, mr.vampire, thetzin, yelinoo, zo
Find More Posts by လင်းထိုက်
ပို့စ် 132 ခုအတွက် 840 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အောက်ပါအသင်းဝင် 25 ဦးတို့မှ ပွင့်ဖူးမွန် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကျန်းသုငြိမ်း, ဆရာသဘိတ်, နီထွန်းဦး, မိုးအာကာ, ရှင်းလေး, အိုက်ထွန်း, ဇေယျာအေး, အောင်မင်းကို, အေးချမ်းမောင်မောင်, အေးမင်းမောင်, aungkohtat, bagothar85, bonge, Emc Arkar, frogfish, g00gle, khaing king, kingofvirus, Lwin Thu, minthike, mr.vampire, thetzin, tu tu, yelinoo, zo
Find More Posts by ပွင့်ဖူးမွန်
အစ်မ ပွင့်ဖူးမွန်ပြောသွားတာလုံးဝမှန်ပါတယ်။ ညီမဆိုကွန်ပျူတာ ကိုတော်တော်ဝါသနာပါပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ညီမက လည်း ကွန်ပျူတာ ကိုဘဲ ဇောင်းပေး ပြီး Pro ဖြစ်အောင်လုပ်ချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ညီမ အခု ဆယ်တန်းအောင်ပြီး လို့ တက္က သိုလ်တက်ဖို့လိုင်းရွေးတော့ Eco ကို မိဘတွေက တက်စေချင်တယ်။ ကွန်ပျူတာက အမှတ်မမှီလို့ မဟုတ်ပေမယ့် မိဘတွေက ကွန်ပျူတာ တက္က သိုလ်ကို မတက်စေချင်ဘူး လေ။ ဒီတော့ Interest နဲ့ career က တော်တော်လေး လွဲနေတယ်လို့ထင်တယ်။ ဘာလုပ်ရမလဲမသိသေးဘူး။ ကွန်ပျူတာ နှင့် အသက်မွေးရင် မိမိကိုယ်တိုင်လဲ စိတ်ဝင်စားရင်ပိုကောင်းပါတယ် ။ စိတ်ဝင်စားလို့က တော့ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်ကောင်းတယ်။ Your choice is your life!
အောက်ပါအသင်းဝင် 13 ဦးတို့မှ frogfish အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဇာနည်စိုး, နီထွန်းဦး, အောင်ဗလ, အောင်မင်းကို, bonge, g00gle, kingofvirus, Lwin Thu, minthike, mr.vampire, thetzin, yelinoo, zo
20-08-2011, 10:49 PM
မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့ Designer က ပို popular ဖြစ်နေပါတယ်။ မဂ္ဂဇင်းတို့ စာစောင် တို့တွေမှာ ပုံတွေထည့် တတ်ရင် အလုပ် ရလွယ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ Programmer အနေနဲ့ က တော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အလုပ်ရှားမယ်လို့ထင်တယ်။ သင်တန်းမှာ ၀င်သင်တဲ့ ဆရာ၊ဆရာမ လုပ်တာ လောက်ဘဲ တွေ့တယ်။ အပြင်မှာလည်း ရှိပါတယ်။ဒါပေမယ့် နိုင်ငံခြားမှာလို့တော့ လူသိပ်မသိဘူး လို့ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့် နောင် အခါတော့ ပြောလို့မရပါဘူး ။ မြန်မာနိုင်ငံ ဖွံ့ ဖြိုးလာရင် IT နည်းပညာတွေ တိုးတက်လာရင် Programmar တွေ အတွက်အလုပ်မရှားနိုင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ Web designer တို့ တွေက တော့ အတူတူပါဘဲ။ နောင်အခါ ဖွံ့ဖြိုးလာမှ အလုပ်ဖြစ်မှာပါ။ အခု လောလောဆဲတော့ ရှားသေးတယ် ထင်တယ်။ ဒါတွေက ညီမတွေးမိတာတွေကို ပြောပြတာပါ။ အတွေ့အကြုံမရှိသေးတဲ့ အတွက်အမှားပါရင် ခွင့်လွှတ်ကြပါနော်။
အောက်ပါအသင်းဝင် 10 ဦးတို့မှ frogfish အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
aungkohtat, bonge, g00gle, khaing king, kingofvirus, Lwin Thu, minthike, mr.vampire, thetzin, zo
မိန်းကလေးတွေ အတွက်ဆို၇င် တော. Accounting ပိုင်းဆို အလုပ်၇တာ မြန်တယ်ဗျ။
ဥပမာ LCCI level 1,2,3 / UBS accounting တို.ပေါ.ဗျာ
ကျွန်တော် သိတာက မန္တလေး အတွက်ပဲနော် ၇န်ကုန်အတွက်တော. မသိဘူးဗျ
ဘဏ်တွေမှာ အလုပ်လျှောက်၇င်လည်း ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ် ဆို တော်တော်များများခေါ်ပါတယ် ဘွဲ.ကြောင်. ဘာလားတော. မပြောတတ်ဘူးနော
အောက်ပါအသင်းဝင် 11 ဦးတို့မှ putty အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်စိန်ရွှေ, bonge, frogfish, g00gle, kingofvirus, Lwin Thu, minthike, mr.vampire, thetzin, yelinoo, zo
26-08-2011, 01:19 PM
ပို့စ် 297 ခုအတွက် 1,511 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အခုဆို မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခြေအနေတွေပြောင်းလဲနေပါပြီ။ it နည်းပညာအတွက် နှစ်ရှည်စီမံကိန်းတွေရေးဆွဲချမှတ်ပြီး
အကောင်အထည်ဖော်နေကြပါပြီ။ နှစ်(၃၀) ရည်ရှည်စီမံကိန်းတွေအတွက် (၅) နှစ်စီ နှစ်တိုစီမံကိန်းတွေဆွဲပြီး
ဆောင်ရွက်နေကြပါပြီ။ ပထမ (၅) နှစ်တာကာလ နှစ်တိုစီမံကိန်းမှာတင် အများကြီးပြောင်းလဲခဲ့တာအားလုံးအမြင်ပါဘဲ။
MICT Park ကြီးကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့တာက it လောကရဲ့ သမိုင်းတစ်ခုပါဘဲ။ ဒုတိယ (၅) နှစ် စီမံကိန်းမှာလည်း it industry တည်ထောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် it သမားတွေအတွက်
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ပိုများလာမှာပါ။ စတင်လေ့လာဖို့အတွက်ကတော့ Computer ကို
အခြေခံလောက်တော့ သိရှိနားလည်ထားရပါမယ်။ Computer ဘာလဲ? Hardware ဆိုတာဘာလဲ?
Software ဆိုတာဘာလဲ? အဲ့ဒီ့ကမှဘာတွေခွဲထွက်သွားတာလဲ? ခွဲထွက်သွားတဲ့လိုင်းတွေကမှ ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ပညာရပ် ၊ ကိုယ်အားသန်ရာပညာရပ်ကဘာလဲ ? ဘယ်လိုလေ့လာမလဲ? စတာတွေကိုတစ်ဆင့်ခြင်း
လေ့လာသင့်ပါတယ်? Computer ကျောင်းဆင်းမဟုတ်ပေမယ့် သင်တန်းကျောင်းတွေ ရှိတာဘဲ သင်တန်းလေးတွေလိုက်တက်ပြီး it Certificate တွေ Dip တွေ Degree တွေကိုယူလို့ရနေပါပြီ။
Computer ကျောင်းဆင်းပြီး လုပ်ငန်းခွင်မ၀င်နိုင်တဲ့သူတွေရှိသလို ရိုးရိုးဘွဲ့လက်မှတ်လေးကိုင်ပြီး
Pro ဖြစ်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ ဒါတွေက မိမိတို့ရဲ့ ၀ါသနာပါမှု/မပါမှု စတာတွေအပေါ်အခြေခံပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက အတွေ့အကြုံပိုင်းကလည်းအရေးကြီးပါတယ်။ သင်တန်းတက်တယ်ဆိုတာက သင်တန်းကဆရာတွေက သိရှိနားလည် သဘောပေါက်ရုံသာ သင်ကြားပေးတာဖြစ်လို့ လက်တွေ့မှာ
မိမိရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်နဲ့သာ တီထွင်ဖန်တီးမှုတွေ ဖြေရှင်းမှုတွေ လုပ်ဆောင်ရမှာပါ။ ဥပမာပြောရရင်
အခုနောက်ပိုင်းမှာ Graphic Designer တွေခေတ်စားလာပါတယ်။ ခေတ်စနစ်အရ
အလုပ်အကိုင်ပေါလို့ ဒီသင်တန်းလေးတက်ပြီး ဒီအလုပ်လေးလုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ မဖြစ်ပါဘူး။
Graphic Designer တစ်ယောက်ဟာ Illustrator, Indesign, coreldraw တို့လောက်ကျွမ်းကျင်ဖို့အတွက်အသာထား
ဒီပညာရပ်လေ့လာဖို့အတွက် ကိုယ့်မှာ အနုပညာအမြင်ရှိ ၊ မရှိ အရင်ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ။
နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ အရောင်တွေရဲ့ သဘောသဘာဝ ကိုနားလည်နိုင်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် it လိုင်းလိုက်တော့မယ်ဆိုရင် အချိန်ပေးပြီးအရင်လေ့လာသင့်ပါတယ်။ Computer ၀ယ်မယ်ဆှို်ရင်လည်း
အပြင်မှာတန်ဖိုးနည်းနည်းနဲ့ဝယ်ယူလို့ရသလို ပြည်တွင်းမှာတင် မိမိတို့ကိုယ်တိုင်စိတ်တိုင်းကျ အစိတ်အပိုင်းအလိုက် ၀ယ်ယူတပ်ဆင်အသုံးပြုနေနိုင်ပါပြီ။ အတိုချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ it သမားတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ရင်
it နဲ့ပတ်သတ်လို့ လေ့လာပါ မှတ်သားပါ အတွေ့အကြုံကောင်းတွေယူပါ လို့အကြံပြုပါရစေ။
အောက်ပါအသင်းဝင် 18 ဦးတို့မှ mr.vampire အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စနိုးလေး, နီထွန်းဦး, မိုးအာကာ, အိုက်ထွန်း, မောင်စိန်ရွှေ, အောင်ဗလ, အောင်မင်းကို, ah nai, aungkohtat, frogfish, g00gle, kingofvirus, Lwin Thu, minthike, thetzin, tu tu, yelinoo, zo
26-12-2011, 01:33 PM
ပို့စ် 11 ခုအတွက် 60 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ညီလေးရေ အကောင်းဆုံးကတော့ ကိုယ်လုပ်မဲ့ အလုပ်ကို အချိန်ပေးရမယ်. စိတ်ပါဝင်စားစွာ တစိုက်မတ်မတ်လုပ်ရမယ် ဟိုဟာကောင်းနိုး ဒီဟာကောင်းနိုး မဖြစ်စေချင်းဘူး လိုင်းေ၇ွးပြီးရင်တော့ ညီလေးရေ ကြိုးစားကွာ အားပေးတယ် ညီလေးအသက်ငယ်သေးရင်တော့ ပရိုလိုင်းဘက်လိုက်ပေါ့ကွာ ဒါကတော့ ရေရှည်စီမံကိန်းပေါ့ ငွေရေးကြေးရေးနဲ့ အပူတပြင်းဆိုရင်တော့ ဖိုတိုချော့ (သို့) ဒစိုင်းဘက်လိုက်ပေါ့ကွာ အဓိကကတော့ ညီလေး ၀ါသနာပါရမယ် စိတ်ဝင်စားရမယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ fairywin အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
khaing king, kingofvirus, mr.vampire, putty, thetzin, yelinoo, zo
Find More Posts by fairywin
Originally Posted by fairywin
အင်း....ကွန်ပျူတာနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း တစ်ခုပြုမယ်ဆိုရင် စဉ်းစားစရာတွေကတော့များသာဗျ
ဆိုပါစို့ .....ကိုယ့်ညီတစ်ယောက်က ကွန်ပျူတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်မသိတောင် တော်တော်များများ တော့သိတယ်ခင်ဗျ....
၁. အခြေခံနှင့် ကွန်ပျူတာ ဒီဇိုင်းသင်ကြားခြင်း
၂. စာစီစာရိုက်၊ မိတ္တူ၊ ဖိတ်စာ ၊ စာအုပ်ချုပ်
၃. ဗီဒိုယို အက်ဒစ်
၄. ဟာ့ဒ်ဝဲလ်၊ ဆော့ဝဲလ် အင်စတော
အဲဒါတွေအကုန်လုပ်တယ်ဗျား.....အဲဒါနဲ့ သူ့ကို မေးကြည့်တော့
ညီလေး မင်းဘာလို့တစ်ခုထည်းကို ပဲ တစိုက်မတ်မတ် မလုပ်တာလဲပေါ့...
သူက ဒီလိုပြန်ဖြေတယ်ဗျာ....တစ်ခုတည်း လုပ်ရင် အလုပ်အမြဲမရှိဘူးတဲ့.....အဲဒီတော့
အလုပ်တခုမဟုတ် ...တခု ရှိအောင် ဆက်စပ်မှုရှိတာအားလုံး လုပ်ထားရတယ်ဆိုပဲ....
အင်းအဲဒီတော့ ကွန်ပျူတာ နဲ့အသက်မွေးမယ်ဆိုရင် ဘာတွေလိုမလဲ ဘာတွေရင်းနှီးရမလဲ
သူပြောသလိုပဲ .....ဆက်စပ်မှုရှိတာကို ကျွမ်းကျင်အောင်လေ့လာပါ...ပြီးတော့ အကုန်လုပ်ပေတော့
ဒါမှ အလုပ်တခုမဟုတ် တခု ရှိနေမှာ..ဒါက ကျွန်တော်သူ့တစ်ယောက်ထဲအမြင်ကိုပြောတာနော......
မိသားစုများ.....ငြိမ်းချမ်းပါစေ.......နှစ်သစ်မှာ .....ဒီထက်ဒီထက် ........ဗဟုသုတတိုးပွားနိုင်ပါစေ
အောက်ပါအသင်းဝင် 8 ဦးတို့မှ လင်းလက်တာရာ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကျန်းသုငြိမ်း, အောင်ဗလ, aung.123a, g00gle, khaing king, kingofvirus, yelinoo, zo
Find More Posts by လင်းလက်တာရာ
ကျွန်တော်က အခု graphic design သင်တန်းတက်နေပါတယ် သင်တန်းမှာက photoshop, illustatlor,indesign,after effect,perimer စတဲ့ဆော့ဝဲလ်တွေသင်ပါတယ် professional designer တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဘာတွေလိုလဲ ဘယ်လိုတွေလုပ်ရမလဲ ဘာဆော့ဝဲလ်တွေတတ်သင့်လဲ အသေးစိတ်ပြောပြပေးပါလားဗျာ ပြီးတော့ နိုင်ငံတကာနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ designerနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေဘယ်လေယက်ရှိလဲဆိုတာလဲပြောပြပေးပါ
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ chitlumite အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by chitlumite
ကျွန်တော် ဖတ်မိတာလေးပေါ့ စဉ်းစားစရာလေးတွေတော့ ကျန်မယ်တူတယ်။
ကွန်ပျူတာ နှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုတော့မည်သူများအတွက် အချက် (၁၀)ချက်
မောင်စိန်ရွှေ, g00gle, mr.vampire, zo
Originally Posted by လင်းလက်တာရာ
ဆိုပါစို့ .....ကိုယ့်ညီတစ်ယောက်က ကွန်ပျူတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်မသိတောင် တော်တော်များများ တော့သိတယ်ခင်ဗျ....
၁. အခြေခံနှင့် ကွန်ပျူတာ ဒီဇိုင်းသင်ကြားခြင်း
ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ တကယ်ရေရှည်မှာ ပရို တစ်ယောက်အနေနဲ့ အသက်မွေးကျောင်းပြုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ တစ်လိုင်းထည်းကိုပဲ တစ်စိုက်မက်မက် လေ့လာတာအကောင်းဆုံးလို့ထင်ပါတယ် ... ဒါပေမဲ့ ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကိုလဲ မဆိုင်သလို နေလို့မရပြန်ဘူး....
ဥပမာ ဒီဇိုင်းနာ တစ်ယောက်ဗျာ.. ဟက်ဝဲပိုင်းကို အခြေခံလောက်တော့ သိသင့်တယ် အင်တာနက်လိုမျိုးကိုလဲ သေသေချာချာ သုံးတတ်ဖို့တော့ လိုမှာပါ..... ဒီလိုပဲ ကျန်တဲ့ နောလစ် တွေကိုလဲ သိထားသင့်သေးတယ်...... အရေးကြီးတာက ကိုယ် စိတ်အ၀င်စားဆုံးလိုင်းကို သေသေချာချာလေ့လာဖို့ပေါ့... ကျွန်တော်ဆို ဘွဲ့က စာရင်းအင်း (အီကို) စိတ်ဝင်စားတာက ကွန်ပျူတာ အဲ့တော့ ကျောင်းကိုမတတ်ဘူး အပြင်မှာ အိမ်ကမသိအောင် သင်တန်းတွေ တတ်တယ် .... အဲ့တောက အတန်းချိန်က မပြည့်..... စာတွေကလဲ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတာ တစ်ခုမှ မပါ... အဲ့တော့ စာမရ ... စာကမရ အတန်းကမရှိဆိုတော့ ... စာမေးပွဲကျ... ကျွန်တော်လဲ ဟက်ဝဲ ဆော့ဝဲ ဖုန်း အားလုံးလုပ်ရင်း လုပ်ရင်းနဲ့ ငါးနှစ်ဆိုတဲ့ အချိန်ကိုသာရောက်လာတယ်... အခုချိန်ထိအမှန်တိုင်းပြောရရင် စမ်းတ၀ါးဝါးပဲ... ကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော့ လက်တလော အဆင်ပြေဖို့ထက် ကိုယ်တကယ် စိတ်ဝင်စားတဲ့လိုင်းမျိုးကို လိုက်သင့်တယ်လို့ပဲထင်တယ်... စိတ်ဝင်စားတယ် ကြိုးစားမယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်ခက်ခဲတဲ့ ပညာမျိုးမဆို အတတ်မြန်ပါတယ်... အခုလောလောဆယ်အချိန်မှာ သူများထက် လစာနည်းမယ် ပိုပင်ပန်းမယ် ဘာဖြစ်လဲ လုပ်သာလုပ်... ကိုယ်ကြိုးစားရင် ကြိုးစားသလောက် ဖြစ်လာမှာပဲ လေ နောင်တစ်ချိန် အိုင်တီ ပိုင်းက အရေးပါတဲ့ အခန်းကနေ ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ မြေကြီးလက်ခက်မလွဲပါဘူး... ဒါတွေက ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းရဲ့အမြင်ဆိုတော့ မှားရင်လဲ ထောက်ပေးပါအုန်းနော်...
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ ရှင်းလေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Sep 2013
ကွန်ပျူတာဆိုင်တွေက မှိုလိုပေါနေတယ် တော်ရုံနဲ့တော်မရဘူးနဲ့တူတယ်နော် ဖိုရမ်က ညီကိုမောင်နှမများလုံး မစ မှ အားလုံးတိုးတက်မှာလို့ထင်တယ် ကိုင်းကျွန်းမှီ ကျွန်းကိုင်းမှီပေါ့နော်
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ ချစ်ကြီး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ချစ်ကြီး
အကောင်းဆုံးကတော့ကိုယ်ဘယ်လိုဟာမျိုးကို လုပ်ချင်တာလဲ ကိုယ်ဝါသနာပါတာ ကို အရင်ရွေးကြည့်ပါ ကွန်ပျူတာဆိုတာ အရင်ထိတွေ့ပြီးမှ ကိုယ် ဘယ်လိုင်းကို ကြိုက်လဲစဉ်းစားပြီး လေ့လာရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်ပါတယ် ခဗျာ
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ရှော့ကတ် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ရှော့ကတ်
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Jun 2013
ပို့စ်6ခုအတွက် 32 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အစ်ကိုတို့ညီတို့ရေ ကျွန်တော်လည်းကွန်ပျူတာအကြောင်းလေးတွေ့လို့အကြံအညံတောင်းလိုက်ဦးမယ် ကျွန်တော်ကရုံးတစ်ရုံးမျာအလုပ်လုပ်ပါတယ် ကွန်ပျူတာနှင့်ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုပေါ့ တော်တော်များများကတော့ Application ပိုင်းတွေပေါ့ ဥပမာ Word တို့ Excel တို့နဲ့ photoshop စာစီစာရိုက်တွေကိုပေါ့ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်က ကွန်ပျူတာ Hardware ပိုင်းတွေကိုတော်တော်သိချင်ပါတယ် ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာက အင်တာနက်တော့သုံးလို့ရတယ် အချိန်မရဘူး နောက်ပြီးမြို့နဲ့လည်းအလှမ်းကွာတော့စာအုပ်တွေလည်းမရ နဲ့ အဲ
ါကူညီနိုင်ရင်မိသားစုများကူညီကြပါဦး ဖတ်စရာစာအုပ်လေးများရှိရင်တင်ပေးကြပါဦး အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်လျှက်
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ paingkha အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by paingkha